ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံတွေနဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီတို့ကြားက ပြဿနာကို ဆက်ဆံရေးရုံးက မဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ ဒေသခံတွေ ထိုင်သပိတ်ဆင်နွှဲ (ရုပ်သံ)
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံတွေနဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီတို့ကြားက ပြဿနာကို ဆက်ဆံရေးရုံးက မဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ ဒေသခံတွေ ထိုင်သပိတ်ဆင်နွှဲ (ရုပ်သံ)
Government do not handle properly. Still betraying
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီကူးပြောင်းကာလ Rule & Law နဲ.
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရမယ်.အချိန် မှာ နောက်ကွယ်က
အရိပ်မဲ. ဘိုးတော်တွေ တိုင်းပြည် ပိုင်တယ်ဆိုတဲ.
"ငါတကော " ကိစ္စကြီး ပါလာတော.
မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ ဆိုသလို .............၊